Balloons, Afụ gum, na Martech: Kedu Onye Na-abụghị? | Martech Zone
Balloons, Afụ gum, na Martech: Kedu Onye Na-abụghị?
Thursday, January 12, 2017 Saturday, January 14, 2017 Patrick Tripp
N'adịghị ka balloons na afụ gum, Martech agaghị agbawa mgbe agbatị na ihe yiri ka ọ bụ nkwụsị. Kama, ụlọ ọrụ Martech ga-aga n'ihu ịgbanwee ma gbatịa ma gbanwee ka ọ gbanwee na ihe ọhụrụ - dịka ọ mere ọtụtụ afọ gara aga.
O nwere ike ịdị ka ụlọ ọrụ anaghị eto eto ugbu a. Ọtụtụ ndị ajụwo ma ụlọ ọrụ martery - ọ na-ewute ya karịa 3,800 ngwọta —Nke otuela aka ya. Azịza anyị dị mfe: Mba, ọ bụghị. Innovation agagh adalata oge obula. Ihe omuma a na-agbasawanye mgbe nile bu ihe ohuru ohuru na ndi ahia gha mututa otu esi ejikwa ya.
Onu ogugu nke ihe omuma nke uzo okpukpu abuo ma obu okpukpu ato kwa afo site na mgbe chiefmartec.com malitere nyochaa uzo ahia ahia na 2011, rue ya ugbu a dị 3,874. Mmasị na mgbasa ozi abawanyela. Dị ka Walker Sands State nke Technology Technology 2017 akụkọ, pasent 70 nke ndị ahịa 300 gbara ajụjụ ọnụ na-atụ anya ka mmefu teknụzụ nke ụlọ ọrụ ha ịbawanye na 2017; naanị ụzọ abụọ na-atụ anya ka ọ belata. Otu ihe kpatara ndị na-ere ahịa ji enwe obi ụtọ na ozi ọma: nsonaazụ. Pasent iri isii na itoolu nke ndị ahịa Walker Sands gbara ajụjụ ọnụ na-ekwu na teknụzụ azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ha ugbu a na-enyere ha aka ịrụ ọrụ ha nke ọma. Nke a sitere na 58 pasent n'afọ gara aga.
Martech na-arụ ọrụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa enweelarị nnukwu mkpuchi Martech. Yabụ, ịgbakwunye ngwaọrụ pụtara ịchọta teknụzụ ziri ezi iji kwado atụmatụ ha na ebumnuche ha. Mkpa ndị ahịa pụrụ iche, nke mere na ihe dịka ọkara nke ndị ahịa jụrụ 48% ejirila ihe ha wuru ngwọta kachasị mma, ebe ọ bụ naanị pasent 21 na-eji otu ụlọ ahịa. N'ezie, 83% nke ndị na-ere ahịa na-eji ihe ngwọta kachasị mma eme ihe na-egosi ikike ụlọ ọrụ ha nwere “ibutu ike nke ngwa ọrụ ha dị ka magburu onwe or mma, ”Dị ka nchọpụta Walker Sands si kwuo.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eche na ụlọ ọrụ na-agagharị ngwa ngwa karịa ka ha nwere ike ijide.
Onu ahia martech agagh adi. Ọ na-aga ịnụ ụtọ ma gbasaa-ya na onyinye na-eto eto nke niche egwuregwu mgbe niile-yana, n'ihi ya, na-aga n'ihu ịkwado mkpa ndị pụrụ iche nke ndị ahịa. Mana inyochapụta nhọrọ niile dịnụ iji chọta naanị ezigbo azịza chọrọ ndị na-ere ahịa ka ha nwee usoro njikọ zuru oke nke ndị ahịa, yana ụzọ dị mma iji kpaa ngwaọrụ kachasị mma iji kwado atụmatụ ahụ.
Ndị ahịa nke oge a bụ ndị na-amaghị ihe ọ bụla, yabụ atụmatụ itinye aka na ndị ahịa ọ bụla kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ nke ọma iji rụọ ọrụ ogologo oge. Usoro ntinye aka nke gafere oke ala chọrọ onye nwe ya nwere nka na ikike iji nweta nkwado ndị isi yana duzie nzukọ ahụ site na mgbanwe-gụnyere mmebi nke silos.
Otu ụzọ isi kpochapụ silos, yana iwekọta ngwaọrụ ndị ọzọ dị iche iche, bụ ịnara uzo oghe. Kama ijikọ ngwaọrụ martech na ngwa ngwa, tụlee ijikọta ha na oyi akwa data. Nke a na-enye ndị ndu azụmaahịa aka iche echiche karịa ahịa ma tụlee otu esi akwado ọrụ ndị dị ka ahịa na ọrụ gafee ọrụ ahụ. Ọ na - enyekwa ndị ọchụnta ahịa aka ịmekọrịta teknụzụ mgbasa ozi na ozi ọma iji nweta uru ahịa ahịa niile dị.
Ngwa data nke ndị ahịa (CDPs) mee ihe dika igwe nke ahụ na-enyere òtù dị iche iche aka ijikọ data na ngwa dị n’ogige oghe. Nke a na - achota na ndị ahịa nwere ike ime ihe ma bulie ndị ahịa ọ bụla. - CDPs na - enyere aka inweta data, nchịkọta, ọwa, na ndị ahịa n'ofe ụlọ ọrụ ahụ. Usoro a na-enye ohere ịnweta data ebe ọ bụla ọ bi, site na usoro dị iche iche na isi mmalite nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-ere ahịa nwekwara ike iji usoro dị elu dị ka isi akara na ịmụ igwe. Ndị CDP na-eme ka ịnweta ọwa ọ bụla dị mfe site na usoro okike na-emeghe. Ijikọ ọ bụla dijitalụ ma ọ bụ ọwa ọdịnala-gụnyere Ndị DMP, DSPs, ESPs - nwere ike ịbanye n'ime ogige ghere oghe.
Nsonazụ ahụ? Iji uzo emepere emepe iji jikwaa azịza azịza na-eto eto na-enye ndị ahịa ohere ịkwalite itinye aka na ndị ahịa gafee ụlọ ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ, ịmepụta usoro ọrụ ga-esi gafee ahịa, ahịa, na ọrụ, na-emetụ ndị ahịa, ndị ọrụ, ọrụ, na ngwaahịa aka.
Afọ Na-enweghị Pop
Onyinye martech agbasabeghị. Ma ọ bụ na ọ na-aga ọ bụla oge adịghị anya. Site na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-ere ahịa na oghere, yana ọhụụ na nkwado na-aga n'ihu, ndị na-ere ahịa nwere ike ịchọta naanị azịza ziri ezi iji dozie mkpa, ọchịchọ ha na ọchịchọ ha pụrụ iche.
Enweghị ohere maka otu ụzọ-ụzọ niile ịre ahịa taa, nke pụtara na enweghị ohere maka otu ụzọ-ịbịaru ahịa teknụzụ ahịa. Ndị na-ere ahịa na-achọ ime ihe ga-eme ka ndị ahịa nwee ike ịrụ ọrụ na ndị na-ere ahịa teknụzụ nwere atụmatụ mmekọrịta dịka ịme ka oghere oghere na-abanye na ntinye. Nke ahụ bụ ka ahịa ROI ga-esi gbasaa n'ụzọ ziri ezi yana mkpokọta martech na-eto eto.
Tags: 2017nke kachasị mmaafụcdpAhịa Data PlatformdmpNkejiespodida obodo ahiaire ere roinkatamartech afụmartech tojupụtaraNwachukwuROIala nke teknụzụ ahịaala nke martechWalker ájá
Patrick Tripp na-eweta afọ iri na asaa nke ahụmịhe na teknụzụ, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịre ahịa na azụmaahịa ya dị ka osote onye isi ala nke atụmatụ ngwaahịa maka Convergent Marketing Platform na RedPoint Global. Na mbụ, Patrick na-elekọta email na usoro ịre ahịa ahịa na Adobe. Tupu nke a, o duuru usoro azịza azụmaahịa nke oge na Neolane, nke Adobe nwetara na 2013.
Nchịkọta Global Marketing maka Otu indị na Mba 23
10 Ihe 8 Awa 2017 na CES XNUMX kụziiri m banyere echi si Tech